Yini i-Deal nge-Strategic Electrification? - Isikhungo se-EcoTechnology
Yini i-Deal nge-Strategic Electrification?
Njengoba isenzo sokushintsha kwesimo sezulu sikhula ngokuphuthuma, ezinye izifundazwe seziqalile ukukhuthaza ukonga amandla kagesi kanye nogesi ongenawo umoya njengezindlela zokubhekana nalezi zinkinga zemvelo. IMassachusetts, ngokwesibonelo, inikezwa IMisa Londoloza, uhlelo lokusebenzisa amandla okugxila ekunikezeni amandla abahlali, amabhizinisi, nemiphakathi ukuthi ithole ukufinyelela ekuvuseleleni ezonga ugesi. Yize lokhu kuthuthukiswa kubalulekile, ngokusho kwe- Ukubambisana kobuchwepheshe bamandla kazwelonke (NEEP), amasu kagesi adinga ukufakwa ukuhlangabezana ngokugcwele nezinhloso zokunciphisa ikhabhoni.
Isikweletu sezithombe: Ukubambisana kweNyakatho-mpumalanga ye-Energy Energy
Kuyini ukufakwa kukagesi ngamasu?
Ukufakwa kagesi kwamasu kufaka phakathi ukushintsha izinto zikagesi, ukushisa kanye nezinhlelo zokupholisa, nabanye abasebenzisi bamandla ekhaya lakho ukuze banikwe amandla kagesi esikhundleni sokuncika kwizibaseli. Lapho kuhlanganiswa nemithombo yamandla evuselelekayo, ugesi wamasu wandisa ukusebenza kahle kwamandla futhi wehlise ukungcola. Le ndlela inamandla okunciphisa izindleko zamandla futhi.
Njengengxenye yecebo elibanzi lokukhishwa kwekhabhoni, ukufakwa kukagesi ngamasu kuyasatshalaliswa emikhakheni eminingi, njengezindawo zokuhlala nezentengiselwano, ezokuthutha kanye nezimboni. Akunciphisi nje kuphela izindleko zamandla nokukhishwa, kepha futhi kukhulisa ukuguquguquka kwegridi nokusebenza kahle. Ukusebenza ngokubambisana nokusebenza kahle okwandisiwe negridi ehlanzekile, ukufakelwa ugesi ngamasu kungasisiza ukuthi sihlangabezane nezinhloso ezinolaka zokunciphisa ikhabhoni.
Ngingasiza kanjani ekufakweni kwamandla kagesi?
Kunezindlela ezintathu eziyinhloko ongasiza ngazo enkambisweni yokufaka ugesi, futhi uzuze kuyo ngasikhathi sinye.
Izimoto zikagesi: Njengoba izimoto zikagesi zithuthuka ekusebenzeni kahle, manje yisikhathi esihle sokwenza ushintsho. Izaphulelo ezimotweni zikagesi ahlinzekwa ngezinhlangano eziningi ezahlukahlukene. Ukuthuthukisa nokuhlinzeka ukushaja imoto kagesi kuyisinyathelo esibalulekile kule nqubo futhi, futhi kukhona amadolobha aseMassachusetts abamba iqhaza ohlelweni LOSIZO nikeza izaphulelo zamasethingi weshaja.
Uhlelo lwamanzi ashisayo kagesi: Uma lokhu kuyisinyathelo esifanele kuwe, ukushintshela ohlelweni lwamanzi ashisayo okumpompa ugesi kungakongela amandla unyaka wonke. Lezi zinhlelo zingenye esebenza kahle kakhulu emakethe. Izaphulelo zitholakala nge IMisa Londoloza ukwenza inkinobho.
I-Solar Access ihlinzeka ngamaphampu okushisa namapaneli elanga kubaninikhaya abazungeze izwe.
Amapompo okushisa: Ukusebenzisa amaphampu okushisa, anikwe amandla kagesi, kuyindlela ephumelelayo yokushisa nokupholisa unyaka wakho wonke wasekhaya. Ngaphezu kwalokho, lapho amaphampu okushisa ehlanganiswe namapaneli elanga, abaninikhaya bonga imali ethe xaxa futhi banciphise umkhondo wabo wezemvelo, baqinisekise ukuthi okungenani ingxenye kagesi owenziwe ngelanga manje usiza ukufaka amandla emakhaya abo. Amaphampu okushisa aqala ukufakwa kakhulu emakhaya aseMassachusetts, futhi imvamisa iyindlela esebenzayo yabanini bemizi yokonga imali futhi banciphise ukuncika kwabo kumafutha ezimbiwa phansi. Ukushintshela kumaphampu okushisa ukushisa nokupholisa ikhaya lakho kuyisinyathelo esihle kakhulu sokususa ikhabhoni. Ngokusho kwe- I-Rocky Mountain Institute, yize izakhiwo ezisebenzisa i-propane kanye nokushisa uwoyela wesikhala nokushisa kwamanzi kuqukethe kuphela i-10% yayo yonke imindeni yase-US, zibala ngaphezu kwe-20% yesikhala namanzi okushisa amanzi. Ukufakwa kwesistimu yokushisa kwesikhala namanzi kungasiza kakhulu kulabo asebevele besebenzisa amasistimu okushisa asuselwa kumafosili.
ISolar Access, uhlelo oluxhaswe nguhulumeni olulawulwa yi-CET, inqwaba yamapaneli elanga namaphampu okushisa abaninikhaya eMassachusetts. Isazi samandla sikuqondisa kulolu hlelo, olufaka isisusa esikhethekile seSolar Access enhlanganisweni esivele ikhona yezinsiza zombuso, zombuso, kanye nezombusazwe zamandla avuselelekayo. Isikhuthazo lesi siqinisekisa ukuthi uzoba namapaneli akho elanga nepompo yokushisa bese ukhokha imali encane kunale oyikhokhela manje ukuthola amandla. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi.
By UNatasha Nurjadin|2019-04-07T14:01:51-04:00Ngo-Mashi 29th, i-2019|Energy Efficiency, Amandla okusindisa, Ukufinyelela Kwelanga|